Zerowatt GZ1072D1-S (Fully Auto Front Load) Washing Machine (7kg) - White | Buy online | SHOP.COM.MM
quick wash 30-44mins
mix wash, shirt, pause (for adding load)
စက်က လည်ပတ်အား အရမ်း ကောင်းလို့ အ၀တ်တွေ အရမ်းသန့်စေတယ်
တော်တော်ကောင်း တဲ့ စက်လေးပါ Read more Hide
(Fully Auto Front Load) အ၀တ်လျှော်စက်လေးက အိမ်မှာ သုံးရတာ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ အ၀တ်တွေ အများကြီးလည်း လျော်နိုင်တယ်။ Read more Hide
Night Mode ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်ခြားစက်တွေလို အသံမဆူတဲ့အချက် ကိုအရမ်းသဘောကျတယ်။ ပြီးတော့ ရေပူရေအေး နှစ်မျိုးလုံးနဲ့လျှော်လို့ရတာ Zerowatt ရဲ့အားသားချက်ပဲ။ လျှော်ထည်များများထည့်ဖို့ ကျယ်လည်းကျယ်တယ်။ Read more Hide
ဒီအဝတ်လျှော်စက်ကလေးက လျှော်ရတာလည်း မြန်ပြီး ပရိုဂရမ်တွေလည်း များစွာပါဝင်ပါတယ်။ Read more Hide
အ၀တ်တွေကို ဖြူစင်သန့်ရှင်းနေအောင် အပြည့်အ၀စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အ၀တ်လျှော်စက်တစ်လုံးပါ။ လျှော်နေစဉ်ဆူဆူညံညံအသံမျိုး မထွက်တဲ့အတွက် သုံးရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ Read more Hide
Zerowatt အဝတ်လျှော်စက်က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဖန်ရှင်စုံပြီး လျှော်နှုန်းလည်း မြန်ပါတယ်။ Read more Hide
Zerowatt GZ1072D1-S washing machine is inverter motor type and it has SAS System which can operate automatically. The benefit of this is having the night mode so that you can stay peacefully around it. It also have quick wash 30-44 minus system. Thus it helps to save the time and can be used in both cold and hot water.
Intelligent wash (59) mins
D2 fuzzy with dispaly
Dimensions : (665 x 575 x 935) mm
GZ1072D1-S (Fully Auto Front Load) ????????????? (7kg) - ?????????
Specifications of GZ1072D1-S (Fully Auto Front Load) Washing Machine (7kg) - White